.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: တားရော့ ဗေဒင် ဆော့ဝဲလ်
တားရော့ ဗေဒင် ဆော့ဝဲလ်
ဗေဒင်မေးတာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တားရော့ဗေဒင် ဆော့ဝဲလ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်နာမည်လေး ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ ကဒ်တစ်ခုကို ရွေးနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို သင့်အတွက် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ
ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ အနော်မေးကြည့်တာတော့ တော်တော်လေး မှန်နေတာ တွေ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း
စိတ်ဝင်စားလို့ မေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် တားရော့ ဗေဒင်ဆော့ဝဲလ်လေးကို အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Labels: Software, ဗေဒင်